Bit By Bit - Abuuritaanka wada shaqeyn xooggan - Hawlaha
[ , , , ] Mid ka mid ah sheegashooyinka ugu xiisaha badan ee ka yimid Benoit iyo saaxiibada ' (2016) cilmi-baaris ku saabsan cod-bixinta dadweynaha ee cod-bixinta siyaasadeed waa natiijada dib loo soo celin karo. Merz, Regel, and Lewandowski (2016) waxay bixisaa helitaanka Manifesto Corpus. Isku day inaad soo saarto sawir 2 laga bilaabo Benoit et al. (2016) iyadoo la adeegsanayo shaqaalaha Amazon Mechanical Turk. Sidee la mid ah natiijooyinkaaga?
[ ] Mashruuca InfluenzaNet ee qaybta iskaa wax u qabso ee dadku waxay soo wargeliyaan dhacdooyinka, cudurrada, iyo dabeecadda caafimaad raadinta ee la xidhiidha jirralka hargabka (Tilston et al. 2010; Noort et al. 2015) .
Isbarbardhig oo ka soo horjeeda naqshadeynta, kharashyada, iyo khaladaadka ay dhici karto ee InfluenzaNet, Isbedelada Google, iyo nidaamka raadraaca hargabka dhaqameed.
Tixgeli wakhti aan la qabin, sida faafida qaabka cusub ee hargabka. Qeexaan khaladaadka suurtogalka ah ee nidaamka kasta.
[ , , ] Dhaqaaleyahani waa wargeyska toddobaadlaha ah ee wargeyska. Abaabul mashruuca xisaabinta aadanaha si aad u ogaato in saamiga dumarka ee ragga ku jira daboolka ay bedeleen mudo ka dib.
Wargeysku wuxuu ka koobnaan karaa sideed gobol oo kala duwan (Africa, Asia Pacific, Europe, Midowga Yurub, Bariga Dhexe, Bariga Dhexe, Waqooyiga Ameerika iyo Boqortooyada Ingiriiska) waxaana dhammaantood laga soo dejisan karaa bogga internetka ee majaladda. Dooro mid ka mid ah gobolladan oo samee falanqaynta. U hubso inaad sharaxaad ka bixiso qaababkaaga faahfaahin ku filan oo ay ku celin karaan qof kale.
Su'aashani waxa ay dhiirigelisay mashruuc la mid ah Justin Tenuto, oo ah aqoonyahan cilmi-baaris ah oo ku saabsan shirkadda CrowdFlower oo ah shirkad aad u fara badan: arag "Time Magazine Really Likes Dudes" (http://www.crowdflower.com/blog/time-magazine-cover-data) .
[ , , ] Dhisida su'aashii hore, hadda waxay sameysaa falanqaynta dhamaan sideed gobol.
Waa maxay khilaafaadka aad ka heshay gobollada?
Waqti intee le'eg oo dheeraad ah iyo lacag ayaa ay qaadatay si kor loogu qaado falanqayntaada dhammaan siddeed gobol?
Ka feker in dhaqaaleyahanku leeyahay 100 daboolo kala duwan todobaad kasta. Ku qiyaas intee wakhtiga iyo lacagta dheeraadka ah ee ay qaadan doonto si ay u kor u qaadaan falanqayntaada ilaa 100 daboolo usbuucii.
[ , ] Waxaa jira dhowr shabakadood oo martigeliya mashaariicda furan ee furan, sida Kaggle. Ka qaybgal mid ka mida mashaariicdaas, oo sharax waxa aad baraneyso mashruucaasi iyo wicitaanada furan guud ahaan.
[ ] Fiiri mowqifka cusub ee joornaalka ku yaal berrinkaaga. Ma jiraan wax waraaqo ah oo laga yaabo in dib loo habeeyay mashaariicda furan ee furan? Sababta ama sababta
[ ] Purdam (2014) sharxayaa ururinta xogta la qaybiyey ee ku saabsan garsoorka London. Soo koob tiri xoogga iyo liidashada naqshadahan cilmi-baarista.
[ ] Dib-u-noqoshadu waa hab muhiim ah oo lagu qiimeeyo tayada xog ururinta xogta. Windt and Humphreys (2016) sameeyay oo tijaabiyey nidaam si loo soo uruuriyo warbixinnada dhacdooyinka iskahorimaadka ka socda dadka ku nool bariga Congo. Akhri waraaqda.
Sidee bay naqshadeydu u hubinayaan in la dhimo?
Waxay bixiyaan dhowr wajood si loo xaqiijiyo xogta laga soo qaaday mashruucooda. Soo koob iyaga. Maxay kuugu qancisay?
Soo jeedin hab cusub oo xogta la xaqiijin karo. Talooyinka waa in ay isku dayaan inay sare u qaadaan kalsoonida aad ku yeelan kartid xogta si habsami leh oo anshax leh.
[ ] Karim Lakhani iyo asxaabtoodii (2013) sameeyeen baaq furan si ay u qaataan algorithms cusub si ay u xalliyaan dhibaatada bayoolajiyada xisaabinta. Waxay heleen wax ka badan 600 oo qoraal ah oo ay ku jiraan 89 habab xisaabeed oo cusub. Soo gudbinta, 30 ayaa dhaaftay waxqabadka Machadka Qaran ee Macaamiisha Mareykanka ee MegaBLAST, iyo soo gudbinta ugu wanaagsan waxay gaartay saxnimada iyo xawaaraha sare (1,000 jeer dhaqso).
Akhri wargeysyadooda, kadibna soo jeediyaan dhibaatooyin cilmi-baaris bulsheed oo isticmaali kara isku mid ah tartan furan. Gaar ahaan, tartankan furan waxa uu diirada saarayaa kor u qaadista iyo hagaajinta waxqabadka algorithm ee hadda jira. Haddii aadan ka fakarin dhibaatada sidan oo kale ah ee ku taal gudahaaga, isku day inaad sharaxdid sababta aadan.
[ , ] Mashruucyada tirakoobka bani'aadamnimada oo badan ayaa ku tiirsan ka qaybgalayaasha ka socda Turkiga Amazon Mechanical. Saxeex si aad u noqotid shaqaale ku socda Turkiga Mashiinka Mashiinka. Waqti hal saac ka shaqaynaya. Sidee tani u saameyn kartaa fikradahaaga ku saabsan naqshadeynta, tayada, iyo anshaxa mashaariicda xisaabinta aadanaha?